Ko Sagaing Tuesday, October 05, 2010 ဟာသ
စိတ္တဇ ‌﻿ဆေးရုံတရုံတွင် သူ့ကိုယ်သူ ကွန်﻿ပြူတာတစ်လုံးဟုထင်‌﻿နေ﻿သော လူနာတစ်‌﻿ယောက်သည် ‌﻿အော်ဟစ်﻿ပြီး ဟိုဘက်သည်ဘက် ပြေးနေလေသည်။ သူ‌﻿အော်ဟစ်‌﻿နေသည်က...
"‌﻿ဟေ့! တစ်‌﻿ယောက်‌﻿ယောက် Esc Key ကိုနှိပ်‌﻿ပေး﻿ကြပါဦး။ Program တစ်ခုက Looping Infinity ထိပတ်‌﻿နေလို့!"
ထိုစဉ် အ﻿ခြားလူနာတစ်‌﻿ယောက်က လှမ်းတား﻿ပြီး...
"Esc Key ကဘယ်နားမှာလည်း" ဟုလှမ်း‌﻿မေး﻿တော့...
"ဒီမှာ‌﻿လေဗျာ" ဟု နှာ‌﻿ခေါင်းကို ထိုး﻿ပြ﻿လေသည်။
ထိုစဉ် ထိုလူက နှာ‌﻿ခေါင်းကို နှိပ်လိုက်‌﻿လေရာ...ကွန်﻿ပြူတာဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်‌နေသောလူကပြေး﻿နေတာရပ်သွား﻿ပြီး Esc Key ကိုနှိပ်‌﻿ပေး﻿သော လူရဲ့ပါးကို ဘယ်﻿ပြန်ညာ﻿ပြန် ဆက်ခါဆက်ခါ ရိုက်‌နေ‌တော့သည်။
ထိုစဉ် အခန်း‌﻿စောင့် သူနာ﻿ပြုဆရာမ ‌﻿ရောက်လာ﻿ပြီး...
"‌﻿ဟေ့﻿ဟေ့ ဘာ﻿ဖြစ်လို့ အဲ့‌လောက်‌﻿တောင် ရိုက်‌﻿နေရတာလည်း ‌﻿တော်﻿တော့﻿လေ...ရပ်‌﻿တော့!" ဟုလှမ်း‌﻿ပြောရာ...
ကွန်﻿ပြူတာဟု သူ့ကိုယ်သူထင်‌နေသော လူနာက﻿ပြန်ပြောလိုက်တာက...
"ဟီး ဟီး ရပ်လို့ မရဘူး ကွန်﻿ပြူတာက Virus ဝင်‌﻿နေလို့။"
‌﻿တောရွာတစ်ရွာမှ မိဘ﻿ဖြစ်သူ‌﻿တွေက ﻿မြို့တွင်‌﻿ကျောင်းတက်‌﻿ေနေသာ သား﻿ဖြစ်သူဆီသို့ စာ‌﻿ရေးပို့ရာ...
အ‌ဖေနှင့်အ‌မ စာ‌﻿ရေးလိုက်တယ်။ သားကျမ္မာ‌﻿ရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။ ရွာမှာအ‌ဖေနှင့်အ‌﻿မေလည်း ကျမ္မာတယ်။ အားလုံးအဆင်‌ပြေတယ်။ သားကိုအထူးမှာချင်တာက သား﻿မြို့မှာ အင်တာနက်ထဲ ခဏခဏဝင်‌﻿နေတယ် ﻿ကြားတယ် သားအင်တာနက်ထဲဝင်﻿ပြီးရင် ﻿ပြန်ထွက်ဦး‌﻿နော်သား ...မင်းအ‌﻿မေကလည်း ငါ့သား အင်တာနက်ထဲ ဝင်သွား﻿ပြီးမှ ﻿ပြန်ထွက်လို့မရမှာတို့၊ ထွက်‌﻿ပေါက်‌﻿ပျောက်‌﻿နေမှာတို့၊ တစ်‌﻿ယောက်‌﻿ယောက်က အထဲမှာ ပိတ်ထားမှာတို့ အဲ့လို‌﻿တွေ﻿ဖြစ်သွားမှာ အရမ်း စိတ်ပူ‌﻿နေတယ်သား...အ‌﻿ဖေနှင့်အ‌﻿မေ စိတ်ချချင်တယ် သားရယ်...
Project ﻿ပြီးသွား‌﻿သောကြောင့် Programmer များ‌﻿အောင်ပွဲခံ‌﻿နေ﻿ကြပုံ...
စိတ္တဇ ‌﻿ဆေးရုံတစ်ရုံ၏ ထမင်းစား‌﻿ဆောင်တွင် ထမင်းစားချိန်﻿ဖြစ်‌﻿သော﻿ကြောင့် လူနာများ ထမင်းကိုယ်စီစား‌﻿နေစဉ် လူနာတစ်‌﻿ယောက်သည် ထမင်းမစား‌﻿သေးဘဲ ထမင်းပန်းကန်ကို﻿ကြည့်လိုက် ‌﻿ခေါင်းကိုရမ်းလိုက်﻿ဖြင့် လုပ်‌﻿နေသည်ကို တာဝန်ကျသူနာ﻿ပြုဆရာမက ထိုသူနားကပ်﻿ပြီး ‌﻿ချော့﻿ချော့﻿မော့﻿မော့ ‌﻿လေသံ﻿ဖြင့်...
"ထမင်းစား‌﻿တော့﻿လေ သူများ‌တွေတောင် စား﻿ပြီး﻿တော့မှာ စား‌﻿တော့﻿နော်" ဟုပြောလိုက်﻿တော့...
"ခဏ‌﻿လေး ခဏ‌﻿လေး Condition စစ်‌﻿နေတာ မ﻿ပြီး﻿သေးလို့ ‌﻿နောက်ဆုံးတစ်﻿ကြိမ်ပဲ ကျန်‌﻿တော့တယ်..."
Number System ပဲသိတယ်
Programmer တစ်‌﻿ယောက်ကို လူတစ်‌﻿ယောက်က ‌﻿မေးခွန်းတစ်ခုလှမ်း‌﻿မေးရာ...
မင်းတို့ Pogrammer ‌﻿တွေဘာလို့ Christmas ‌﻿နေ့နှင့် Halloween ‌﻿နေ့﻿ရော﻿နေရတာလည်း။
ဘာလို့လည်းဆို‌﻿တော့ DEC 25 က OCT 31 နှင့် တန်ဖိုးတူတူပဲ‌﻿လေ...